I-China 1/2 Fold Paper Toilet Seat Cover, Ukwenziwa kabusha kwe-Factory neFektri | UZhonghe
Iphepha lekhava esihlalweni sendlu yangasese luhlobo oluthile lokuhlanzeka, okuphephile nokuhlanzekile okwenziwe ngofola ohlanzekile ongenisiwe njengephepha elilodwa lansuku zonke. Iphepha lekhava esihlalweni sendlu yangasese luhlobo oluthile lokuhlanzeka, okuphephile nokuhlanzekile okwenziwe ngofulawa omsulwa ongenisiwe. Isetshenziswa kakhulu ezindlini zangasese eYurophu, e-United States nakwamanye amazwe athuthukile. Lo mkhiqizo uthintana ngqo nesikhumba, uhlukanisa amabhaktheriya namakhaza futhi uvimbela ukusabalala kwezifo ezithathelwanayo. Lo mkhiqizo unezici ezifana nokulahlwa, kukhukhulwe ngamanzi ngemuva kokusetshenziswa, ukonakaliswa kwamanzi ngokushesha futhi akuxhumi indlu yangasese. Kungumkhiqizo ophephile futhi onobungani bemvelo.
Iphepha uginindela: fibre kabusha
Isisindo: 13g / m2, 14g / m2, 15g / m2,16g / m2
Usayizi: 425mm * 360mm, noma usayizi ngokwezifiso
Ukupakisha: 250pcs / ibhokisi, 20boxes / ibhokisi; noma ukupakisha ngokwezifiso
* Amakhava ezihlalo zephepha zangasese alahlwayo;
* I-Air-land isetshenziselwa ukumboza isihlalo esilahlayo: amanzi ancibilika, angenabungozi esikhunjeni, anobungani bemvelo.
* Ukuphrinta ukwakheka kweseva yamakhasimende.
* Ikhava yesihlalo elahlwayo nenempilo.
* Khipha ingxenye efana ne-arc. Sabalalisa ikhava bese uyibeka esihlalweni, cindezela inkinobho yokugudluza ngemuva kokusebenzisa indlu yangasese.
* Sifafaze ngisho nokusabalalisa lapho uhlala khona umchamo ukubiyela, ngaphakathi vula ucezu lolimi luwele ngokuzenzakalela kungaphakathi kokuchama, ukuze uvimbele amanzi isifutho sifike okhalweni, bese sisebenzisa ukuqeda, futhi sigeze lawo manzi awathathe ngokuzenzakalela.
* Ifanele izibhedlela, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini, indawo yokuvivinya umzimba, izinxanxathela zezitolo, izindawo zokudlela, amahhotela, izindawo zokuphumula ezihamba ngomgwaqo, amahholo omhlangano, amahhovisi kahulumeni, izikole, izindiza, izikebhe zabagibeli, izitimela, i-bidet nazo zonke ezinye izindawo.
I-100% iyashayiseka futhi izoncibilika masinyane kumasistimu we-septic. Iphakethe le-dispenser langaphakathi lihlinzeka ngokuhambisa okukodwa ngasikhathi ukuze kuncishiswe imfucuza ngenkathi isitayela sayo esingangesiqingatha sihlala amatafula amaningi endlu yangasese nezindawo zokuhambisa ikhava.
Iphakethe lekhava yesihlalo sendlu yangasese lilungele abantu abakhathazekile ngenhlanzeko yomuntu siqu lapho besebenzisa izikhungo zomphakathi. Leli phakethe liba wusizo ikakhulukazi kubantu abahambayo, abakanisa, abayothenga noma abasebenza endaweni yomphakathi. Ikhava yesihlalo samathoyilethi ingena kalula esikhwameni, ebhokisini, noma emithwalweni. Umuntu ngeke azi ukuthi indlu yangasese yomphakathi izoba kuphi noma uma izoba nezembozo zezihlalo zangasese. Ukuba nendlu yangasese edla ikhava Iphakethe esandleni kuzoqinisekisa ukuvinjelwa okuvela esihlalweni somphakathi sendlu yangasese. Iphakethe ngalinye le-cvoer seat yesihlalo yangasese liqukethe amakhava ezihlalo zangasese. Ikhava yesihlalo yangasese kulula ukuyisebenzisa, kulula, futhi ilahlwa ngokuzenzakalela uma indlu yangasese isiflashiwe.
Ukupakisha ikhava yesihlalo yangasese: ibhokisi lamaphepha elimhlophe elingaphakathi, ibhokisi elingaphandle likathayela. Thumela pallet ejwayelekile ongayikhetha.
Inkonzo yokuphrinta: Zhonghe Paper Products inikeza ukuphrinta ngakunye noma ukuphrinta kwe-OEM ebhokisini nakumabhokisi.
Ilayisha ubuningi: 1750 amabhokisi 40'HC, 750 amabhokisi e 20'GP.
Langaphambilini I-1/2 Fold Paper Toilet Seat Cover, iVirgin
Olandelayo: Ukusetshenziswa kwenhlanzeko ikhava yesihlalo yangasese engu-1/4